विराटनगर, २६ भदौ । विराटनगर मालपोत कार्यालयले जग्गा कित्ताकाट शुरु गर्न नमानेको जनाउँदै घरजग्गा व्यवसायीले आज एक घण्टाका लागि कार्यालय बन्द गराएका छन् । व्यवसायीले आइतबारदेखि पनि काम शुरु नभए कार्यालय पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यही भदौ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई सो […]
बाँध बनेपछि बस्ती सुरक्षितः स्थानीयवासीमा छायो खुशियाली
लहान, २६ भदौ । बलान नदी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण भएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका–१७ तरेगना गोविन्दपुरस्थित करिब एक हजारभन्दा बढी घर परिवार बसोबास रहेको बस्ती डुबान र कटानको चपेटाबाट सुरक्षित भएका छन् । सिरहा र सप्तरीको सीमानामा पर्ने बलान नदीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या खेप्दै आएका तरेगना गोविन्दपुरका स्थानीयवासी दुई हजार […]
सउल, भदौ २६ । नेपालीहरूको रोजगारीका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाको श्रम बजार कोरोना माहामारीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । कोरोना माहामारीपश्चात झण्डै २५ लाखको रोजगारी गुमेको छ । गत अगष्टमा मात्रै दुई लाख ७४ हजार रोजगारी गुमेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यहाँको बेरोजगारी दर गत अगष्टमा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर […]
कोरोना सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा लैजाने बाकस निर्माण गर्दै महावीर पुन
गलेश्वर, २५ भदौ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा पु¥याउने बाकस निर्माण गरेको छ । खोज, अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रमा कार्यरत सो संस्थाले पछिल्लोपटक कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई अस्पतालसम्म सुरक्षित रुपमा लैजान बाकस निर्माण गरेको हो । बिरामीसँगै एम्बुलेन्समा रहने स्वास्थ्यकर्मी र चालकलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन यस्तो बाकस डिजाइन गरिएको […]
जुम्ला, २५ भदौ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको उद्घानटन कार्यक्रममा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जिल्लामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुने सबै आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गरेको बताउनुभयो । “जनताले सङ्घीयताको प्रत्याभूति घरआँगनमै गर्न सकुन् भनेर जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएको हो”, सांसद महतले […]
बेइजिङ, २५ भदौ । रुसको दक्षिणी क्षेत्रमा यसै महिना आयोजना हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा चिनियाँ र रुसी सेनाले भाग लिने भएका छन् । यस सैन्य अभ्यासमा आर्मेनिया, बेलारुस, इरान, म्यान्मार, पाकिस्तान र अरु मुलुकका सेनाले भाग लिने चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ । “ककेसस २०२०” नाम दिइएको यस सैन्य अभ्यासमा सैन्य सवारी साधनका साथै […]
फ्रान्सेली राफेल लडाकू बिमान भारतीय वायुसेनामा
नयाँदिल्ली, २५ भदौ । भारत सरकारले खरिद गरेका फ्रान्समा निर्मित पाँचवटा राफेल लडाकू बिमान भारतीय वायुसेनामा बिहीबारदेखि समाहित भएका छन् । चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा तनाब बढिरहेको अवस्थामा नयाँ लडाकू बिमान भारतीय वायुसेनामा प्रवेश गराइएको छ । भारतले चीनसँगको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा सैन्य तनाब बढेसँगै ठूलो संख्यामा लडाकू बिमान, हातहतियार र सैनिक परिचालन गरेको छ । […]
नयाँदिल्ली, २५ भदौ । कोरोनाभाइरसबाट अत्यधिक प्रभावित भएको भारतमा एकै दिनमा झण्डै ९६ हजार जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । एकै दिन यति धेरै सङ्क्रमित भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको अधिकारीहरुले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार गत २४ घण्टामा भारतमा कुल ९५ हजार ७३५ जना मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भेटिएका छन् । योसँगै […]
क्यालिफोर्निया, २५ भदौ । उत्तरी क्यालिफोर्नियाको जंगलमा सल्किएको डढेलोमा परेर बुधबार तीन व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अग्नि नियन्त्रकहरुका अनुसार तिब्र गतिका साथ फैलिएको डढेलोका कारण वन छेउमा घरबास हुने हजारौं व्यक्ति आआफ्ना घर छाड्न बाध्य भएका छन् । पहाडी इलाकाको वन डढेलो फैलिएर घरबस्ती भएको तल्लो समथर भूभागमा आइपुगेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । क्यालिफोर्नियाको […]
सप्तरी, २५ भदौ । सप्तरी र सिरहा जिल्लाका गाउँ जोड्न बलान खोलामा झोलुङ्गे पुल बन्ने भएको छ । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकास्थित दूधैला घाट र सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाको सिनुरियाघाट जोड्ने गरी सीमामा रहेको बलान खोलामा झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको हो । नेपाल सरकार र स्वीस बैंकको साझेदारीमा बन्न लागेको पुलको लम्बाइ २७२ मिटर रहने बलान […]
भक्तपुर, २५ भदौ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले आफ्नो अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा नर्सिङ रोबोट परिचालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ‘नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल’ मा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा तीन वटा नर्सिङ रोबोट परिचालन गर्ने भएको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आफ्नो नगर क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न पिसीआर परीक्षणलाई तीव्र बनाएको, क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसन, भेन्टिलेटरसहितको […]
वासिङ्टन, २५ भदौ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक हजारभन्दा बढी चिनियाँ नागरिकको भिसा रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि र अरु संवेदनशील सूचनामा शंकास्पद पहुँच हासिल गरेको भन्दै चिनियाँ विद्यार्थी र अनुसन्धाताको भिसा रद्द गरेको हो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको आदेश बमोजिम सेप्टेम्बर ८, २०२० सम्ममा एक […]
चितवन, २५ भदौ । झण्डै चार वर्षपछि तस्करले गैँडा मारेको अनुमानसँगै निकुञ्ज सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासीको लौखानी नजिकै टापुमा भदौ २१ गते मृत गैँडा भेटियो । पाँच दिनअघि भदौ १६ गते बन्दुकको आवाज आएपछि नेपाली सेना र निकुञ्ज कर्मचारीको खोजीपछि गैँडा शङ्कास्पद अवस्थामा भेटिएको थियो । निकुञ्जले […]
बन्दाबन्दीमै लहलहाउँदै बर्दिवास नगरको सौन्दर्य
महोत्तरी, २५ भदौ । भन्छन् नि, ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।’ महोत्तरीको बर्दिवासमा रोटरी क्लब बर्दिवासले बन्दाबन्दीकै बीचमा (निषेधाज्ञा जारी रहेका बेला) सिर्जनात्मक काम गरेर यो आहानलाई चरितार्थ गरेको छ । रोटरी क्लब बर्दिवासमा आबद्ध यहाँका सामाजिक अभियानकर्मीको सक्रियताले बर्दिवास मुख्यचोकको सौन्दर्य लहलहाउँदा बिरुवाले आकर्षक देखिएको । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, बीपी राजमार्ग (बर्दिवास–बनेपा) र बर्दिवास–जलेश्वर सडकको […]
नेपालका आज ६ जिल्ला भए कोरोनामुक्त, ७ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमित
काठमाडौँ, भदौ २४ । नेपालमा आज कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण नयाँ १०८१ जनामा पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४९२१९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार ब्रिफिंगमा सो कुराको जानकारी दिएका छन् । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९१८ जनाले कोरोना भाइरस जितेसंगै […]
कोरोनाका कारण विश्वभरी दुई करोड ७७ लाख सङ्क्रमित, मृतकको संख्या कति ?
पेरिस, २४ भदौ । विश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म विश्वभरी दुई पौने तीन करोड मानिस सङ्क्रमित भएका छन् । अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार अपराह्न यो सामाचार तयार पार्दासम्म दुई करोड ७७ लाख ५३ हजार २४३ जना सङ्क्रमित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कुल सङ्क्रमित मध्ये नौ लाख दुई हजार १०८ जनाको […]
डब्लुएचओलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रतिवद्धता
बेइजिङ, २४ भदौ । चीनका राष्ट्रपति सी जीङ् पिङ्ले कोरोना भाइरससँग लड्न आफ्नो देशले निभाएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई यस मामिलामा सहयोग गर्ने बताएका छन् । चीनले कोभिड १९ सँग लड्ने रोल मोडलका बारेमा आयोजित बैठकमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । त्यस बखत राष्ट्रपति सीले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक झाउ […]
कंगनाको अफिसको तोडफोड रोक्न बम्बई उच्च अदालतको निर्देशन
बम्बई, भदौ २४ । बम्बई उच्च अदालतले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतको अफिसमा मुम्बई महानगरपालिकाको कारवाही रोक लगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले बीएमसीलाई कंगनाको याचिकाको जवाफ दिन पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि मुम्बई महानगरपालिकाको एक समूहले अभिनेत्री कंगना रनावतको बंगलाका केही हिस्सा तोडफोड गर्न सुरु गरेको थियो जसलाई उनीहरुले अवैध तरिकाले गरिएको परिवर्तन […]
रिया चक्रवर्तीलाई सेप्टेम्वर २२ सम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश
मुम्वइ, भदौ २४ । बलिउडकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई भारतको लागु औषध नियन्त्रण निकायले आफ्नो प्रेमी तथा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतका लागि लागु औषध किनेर दिएको अभियोगमा गिरफतार गरेको छ । ३४ वर्षिय राजपुतलाई गत १४ जुनमा मुम्वइस्थित आफ्नै फ्लयाटमा मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताएका थिए । तर राजपुतका परिवारले […]
लन्डन, २४ भदौ । अस्ट्राजेनिका फर्मास्युटिकल कम्पनीले कोरोनाभाइरसको खोप परीक्षणमा समस्या देखिएको भन्दै अल्प अवधिका लागि खोप परीक्षण स्थगन गरेको जनाएको छ । खोप परीक्षणमा सहभागी एक व्यक्तिमा पहिचान नखुलेको एक प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिए लगत्तै सम्पूर्ण परीक्षण कार्य स्थगन गर्नु परेको कम्पनीले मंगलबार जनाएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग मिलेर कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको […]